Fraport waxay daah furtay terminaal cusub oo rakaab ah magaalada Ljubljana
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Fraport waxay daah furtay terminaal cusub oo rakaab ah magaalada Ljubljana
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Wararka Slovenia • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Fraport waxay maal galisay € 21 milyan terminal casri ah oo istaraatiijiyad u leh garoonka diyaaradaha Ljubljana si loo buuxiyo shuruudaha mustaqbalka ee safarka iyo dalxiiska.
Terminalka cusub ee rakaabka ee garoonka diyaaradaha Ljubljana ee dalka Slovenia ayaa si rasmi ah loo furay bishii Juun 16.
Terminal cusub ayaa loo furi doonaa taraafikada rakaabka laga bilaabo 1da Luulyo.
Fraport waxay abuurtay xarun casri ah oo casri ah oo muujinaysa 10,000 oo mitir murabac oo aag ah oo loogu talagalay hawlgallada jilicsan iyo kordhinta adeegyada.
Bishii Juun 16, Fraport Slovenija - a Fraport AShirkadda G - waxay si rasmi ah u daah-furtay terminalkeeda cusub ee rakaabka ee Gegada Diyaaradaha ee Ljubljana gudaha Slovenia. Fraport waxay maal galisay € 21 milyan terminal casri ah oo istaraatiijiyad u leh garoonka diyaaradaha Ljubljana si loo buuxiyo shuruudaha mustaqbalka ee safarka iyo dalxiiska. Ka dib muddo labo sano ah oo dhisme ah, Terminal-ka cusub wuxuu u furnaan doonaa taraafikada rakaabka bilawga Julaay 1.
Isaga oo ka hadlaya xafladda furitaanka, xubin ka tirsan guddiga fulinta ee Fraport AG, Dr. Pierre Dominique Pr stressedmm waxa uu carrabka ku adkeeyay: “Waxaan ku kalsoonahay in dhismahan uu xoojin doono booska tartanka ee garoonka Ljubljana ee gobolka iyo caalamkaba. Terminalkani wuxuu astaan ​​u yahay hore u socodka mustaqbalka cusub. ” Agaasimaha guud ee Fraport Slovenija Zmago Skobir ayaa intaas ku daray: "Waxaan diyaar u nahay soo noqoshada taraafikada, anaga oo la soconeyna jawigayaga cusub iyo agabyada soo jiidashada leh ee rakaabkayaga iyo ganacsatadeena."
Fraport waxay abuurtay xarun casri ah oo casri ah oo muujinaysa 10,000 oo mitir murabac oo aag ah oo loogu talagalay hawlgallada jilicsan iyo kordhinta adeegyada. Awoodda Terminal-ka ee Ljubljana ayaa laba laabantay si ay ugu adeegto in ka badan 1,200 oo rakaab ah saacaddii. Iyada oo ay weheliso meelo badan iyo raaxo, terminaalku wuxuu soo bandhigi doonaa xulasho ballaaran oo dukaamo ah, maqaayado iyo waxyaabo kale - oo in ka badan 1,200 mitir murabac ah loo heli karo tafaariiqda markii hore. Dr. Prümm wuxuu yiri: "Marka la soo koobo, Terminalkan macaamiisha u janjeedha wuxuu si weyn kor ugu qaadi doonaa khibrada safarka ee garoonka diyaaradaha Ljubljana."
In kasta oo lagu jiray xilligii masiibada aafada, Fraport waxay si guul leh ku dhameysatay dhismaha terminalka waqtigii loogu talagalay iyo miisaaniyadda. Dr Prümm wuxuu kaloo carabka ku adkeeyay in Terminalku diyaar u yahay waqtigii la bilaabi lahaa bilowga bisha lixaad ee Madaxweynaha Golaha Slovenia ee Golaha Midowga Yurub bilowga bisha Luulyo - markaasoo Ljubljana ay ku sugnaan doonto masraxa dhexe ee Yurub iyadoo soo dhaweyn doonta booqdayaasha ka imanaya caasimadaha kale ee Yurub.
Balanqaadkii Fraport ee garoonka diyaaradaha Ljubljana ayaa ka sii dheer dhisida terminaal cusub oo rakaab ah. Tan iyo markii Fraport Slovenija ay bilowday inay maamusho gagida diyaaradaha ee Ljubljana sanadkii 2014, Fraport waxay maal gashatay in kabadan € 60 milyan xarumo cusub, sida Fraport Aviation Academy, xarun dab demis iyo Terminal cusub. Intaas waxaa sii dheer, Fraport waxay si dhow u eegaysaa suurtagalnimada weyn ee xamuulka iyo horumarka garoonka diyaaradaha ee agagaaraha garoonka diyaaradaha. Dhismuhu wuxuu dhowaan ka bilaabmi doonaa xarunta tamarta qorraxda ee garoonka - taas oo qayb ka ah cimilada iyo waxqabadyada deegaanka ee kooxda Fraport Group ee ku taal Slovenia iyo adduunka oo dhan.
Pegasus Airlines: Kaarboonka Kaarboonka ee eber ah ee saafiga ah 2050
Diyaaradda Air Canada ayaa soo bandhigtay qorshe ay si nabad ah ugu soo laabanayso...
Shiinaha ayaa ka dhigaya xogta ka guurista dalka arrin ku saabsan...
Daawaynta Cusub ee Psoriasis Plaque
La kulan Halyeyyada Dalxiiska ee Suuqa Socdaalka Adduunka ee London...
Isniinta Wacan ee IMEX America: Isku imaatinka Asxaabtii Hore
Astaanta Lingerie-ga waxay ka caawisaa dumarka in laga baaro naaska...